Imibukiso ye-OTT Ye-Fashion Inspo - Amathrendi
Imibukiso ye-6 OTT yokubuka i-Edgy Fashion Inspo
6 Ott Shows Watch
Unyaka odlule kube unyaka omude kuwo wonke umuntu! Njengoba sinesikhathi esiningi esinaso, sixhunywe kuzingxenyekazi ezahlukahlukene ze-OTT. Ngenkathi ezinye zijabulisa nje, ezinye ziyathakazelisa ngokulingiswa okuhle kanye nendaba yezindaba. Kodwa-ke, uma kunguwe ongakwazi ukusiza kepha ukwahlulela abalingiswa ngokuya ngezingubo zabo nobucwebe babo, siyakuhalalisela, ulunywa yimbungulu yemfashini!
Ukuqonda i-POV yakho lapha kanye necebo lokwenza kube lula kuwe, sikunikeza imibukiso eyisithupha ukuzitika ngokweqile ngokubuka i-inspo enhle kakhulu yemfashini!
Idrama yentsha yaseMelika, Intombazane Ehleba kuzungeza intsha eseMfashini esezingeni eliphezulu. Kusuka kuma-capes amade ka-Blair Waldorf, amajazi amahle nezimpahla ezisezingeni eliphezulu ezisezingeni eliphezulu kuya ezingutsheni zika-Serena Van Der Woodsen ezikhululekile nezesekeli ze-bohemian, lo mbukiso unikeza zonke izinhlobo zamathiphu wokuthi ungayinyusa kanjani imfashini yakho ngendlela elula kakhulu.
Uma ukugqoka kwendabuko kungukuya kwakho, lo mbukiso unganikeza imibono yakho ekhanyayo yokuthi ungalushintsha kanjani umdlalo wakho wobuzwe. Izingubo zomlingiswa oholayo, uLata (odlalwa nguTanya Maniktala), konke kumayelana nemidwebo yakudala ene-twist yesimanje. Uma ungumthandi wendwangu, yibuke ukuze usetshenziselwe ubucwebe bezindwangu ezifana ne-mulmul, i-handloom ne-organza!
Idrama yaseMelika U-Emily eParis imayelana nomlingisi ogama lakhe lingu-Emily Cooper, othuthela eParis ngomsebenzi. Ukuhlela kabusha i-vibe yenhlokodolobha yezemfashini emhlabeni, izingubo zika-Emily ziyi-chic, ziyimfashini futhi zihlala ziku-point! Ugqoka imibala egqamile, yokwenza izitatimende nokuphrinta okuhambisana nama-berets, izesekeli zezinwele ezifashisayo namabhuzu. Gcina amakhadi akho esikweletu elungele ukuthi ungafuna ukuthenga ngokushesha!
Impilo yakhe yangasese
Impilo yakhe yangasese , idrama edumile yaseKorea, imayelana namabhulukwe nezingubo ze-pastel. Uma ungumlandeli okhuthele wokugqoka umsebenzi osezingeni eliphezulu, lo mbukiso ungakufundisa ukuthi ungasebenzisa kanjani ama-hues akhanyayo futhi anesibindi ukubulala isithukuthezi esihlanganiswe nezingubo ezisemthethweni! Futhi uma uwathanda ama-cardigans, lokhu kungakunika izinkomba zokubekisa.
UNkk Maisel Omangalisayo
Umlingisi oholayo walolu chungechunge, uMidge Maisel ungunkosikazi wendlu ogqoka izitayela ze-quintessential zeminyaka yama-1950 emini futhi aguqule abe ngusomahlaya odidiyelwe ngezingubo zokushintsha ebusuku. Uma imfashini yakho inezithunzi eziningi kuyo, lo mbukiso uzokunika ugqozi lokugqoka lazo zonke izimo ezihlukile. Futhi, ngicela ungasibeki icala uma ugcina ngokuthenga izigqoko zamehlo ezisezingeni eliphezulu nezikhwama uthumele ukuzitika ngocansi ngokubuka lo mbukiso!
Funda futhi : Izindlela ezi-5 zamaChic Rock Rock Denim Athiya Shetty
uwoyela we-badam rogan wokukhula kwezinwele
singanciphisa kanjani ukuwa kwezinwele
kanjani ukuqeda kabili kwesilevu ukuzivocavoca
kanjani ukunakekela izinwele ukuwa
ikhambi lokuwa kwezinwele ekhaya
ungasusa kanjani izisihla ngobusuku obubodwa